Goodax oo weerar culus ku qaaday xildhibaanada kuna eedeeyey arrin xasaasi ah - Caasimada Online
Home Warar Goodax oo weerar culus ku qaaday xildhibaanada kuna eedeeyey arrin xasaasi ah
Goodax oo weerar culus ku qaaday xildhibaanada kuna eedeeyey arrin xasaasi ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Wasaaradda waxbarashadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Xildhibaanada Golaha Shacabka in ay dhibaato ku hayaan howlaha Xukuumadda, islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin Waxyaabo aysan dani ugu jirin Umadda Soomaaliyeed.
Wasiirka Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sidoo kale tilmaamay in Xildhibaanada Golaha Shacabka had iyo jeer ay jecel yihiin in ay hor istaagan shaqooyinka Xukuumadda.
Waxaa uu tilmaamay in xildhibaanada Golaha Shacabka laga doonaayo in ay gutaan Waajidka Saaran oo aysan Mashquul ku noqon howlaha loo xil saaray xukuumadda Soomaaliya.
Hadalka Wasiir ayaa muuqday mid looga jawaabayay eedeeyn maalmihii lasoo dhaafay Xildhibaanada Golaha Shacabka ay u jeediyeen xukuumadda Soomaaliya,taasoo ah in ay ku fashilantay howlaha Ammaanka ee dalka.
Kulankii Xildhibaanada golaha Shacabka ayaa shalay baaqday ka dib markii la waayay Kooramkii lagu furi lahaa Baarlamaanka Soomaaliya.
Hoos ka dhageyso codka Goodax